Sida loo drive adag gurmad on Windows XP si toos ah?
> Resource > Windows > Sidee si toos ah u kaabta Hard Drive ee Windows XP
Maxaad u baahan tahay inaad gaari ku adag gurmad in Windows XP?
Saaxiibo badan oo anigaa ah waxay badanaa ka cawdaan tallaabooyinka Ciyaalle samaynta gurmad drive adag , taas oo horseedaysa in ay carqalad si drive gurmad u adag oo ugu danbeyn, iyaga oo aan haysan dib-u-taariikhda hayaan si loo soo celiyo marka dhibaato timaad.
Dad badan ayaa weli isticmaalaan Windows XP hadda, oo ay ku qaadan doonto laba sano u Windows 7 ku Baddasha ee XP. Sidaas sida loo waqtigii oo si toos ah drive adag gurmad in Windows XP ayaa wareersan dad aad u badan; waxay leeyihiin in la siiyo ilaa iyo gurmad soo celiyo, sida ugu dhaqsiyaha badan si meesha looga saaro dhibaatooyinka computer.
Sida loo drive adag gurmad in Windows XP si toos ah?
In this article, waxaan doonayaa in aan ka hadlo sida ay si toos ah u gaari ku adag gurmad in Windows XP, si aad u awoodaan inay sameeyaan ah si xor ah loo soo celiyo oo aan ka werwerayn khasaaro xogta ama shaqo la kala gooyey.
Marka hore waxaan u baahan nahay software ah nidaamka resotore, tusaale ahaan: Wondershare Time Shuttle. Waxay leedahay waxyaalo badan oo cajiib ah oo halkan aan inta badan ka hadlaan sida ay u gurmad drive adag in Windows XP si toos ah nidaamka cajiibka soo celin software.
Sababta ugu weyn ee in Shuttle Time ayaa lagu talinayaa waa in drives adag gurmad in ka yar 5 ilbidhiqsi, iyadoo aan loo eegayn sida badan oo size xogta waa kartaa drive. Ka sokow, nidaamka this celin programneeds kaliya nidaamka khayraadka yar. Sidaas darteed, ka deg dega ah iyo Cunidda yar hoos u dhigi kala go'a lahayn in aad shaqada, reboot lahayn, ku meel gaar ah, oo aadan u baahan tahay inaad maanka ku tudhi in la xasuusto marka si drive gurmad adag.
Sawirka kor ku xusan ayaa muujinaya hawlaha jadwalka Time Shuttle qaadi karaan baxay. Waxaa awoodo si toos ah gurmad wadid aad u adag maalin kasta, asbuucii, bishii iyo dhibic waqtiga cayiman. Waxa kale oo uu leeyahay kiciya dhacdo, oo waxay qaadan karaan si dhekhso ah ka hor inta uusan barnaamijka setup.exe socda, wax ku ool ah looga hortago weerar furin si aad u computer.
The hab shaqo iyo jadwalka hawlaha aamusan hubiyo in si fiican si toos ah gurmad drive adag in Windows XP iyo aad had iyo jeer kartaa raad-u-taariikhda, oo ay ku jiraan xogta oo dhan aad bedelay on your computer. Marka xiga marka aad hor virus ah, nidaamka shil iyo wax dhibaato ah, hana ka baqan in ay isticmaalaan soo celiyo, iyo dhibaatooyinka aad dhawaan la tageen!